मेलिना राई, गायिका - साप्ताहिक
मेलिना राई, गायिका
मंसिर २६, २०७१
हाल केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
भर्खरै सार्वजनिक भएको मेरो पहिलो एल्बम 'बहार'को प्रोमोसन गरिरहेकी छु । श्रोता, दर्शक, शुभेच्छुक तथा शुभचिन्तकहरूबाट आएका सुझावहरूको एनलाइसिस गरिरहेकी छु । यस्तै केही सांगीतिक कार्यक्रममा पनि सहभागिता जनाइरहेकी छु ।
बहारमा कस्ता गीत समावेश छन् ।
यो एउटा पूर्ण व्यवसायिक एल्बम हो । यसमा सेन्टिमेन्टल, रोमान्टिक तथा गजल टाइपका गीतहरू छन् । ६ वटागीत समाविष्ट एल्बममा डाक्टर किराँतको सोलो संगीत छ भने लव बुढाथोकी, जय किराँती, भूपाल राई तथा गीता त्रिपाठीको शब्द छ । मलाई लाग्छ, मैले एल्बमका सबै गीतप्रति न्याय गरेकी छु ।
कस्तो प्रतिक्रिया आइरहेको छ ?
राम्रो भन्ने धेरै छन् । ठीकै भन्ने कमै छन् । नराम्रो भन्ने त छँदै छैनन् ।
सांगीतिक क्षेत्रमै किन लाग्नुभयो ?
सानैदेखिको हबी हो । सबैले तिम्रो स्वर राम्रो छ, यही क्षेत्रमा लाग्नुपर्छ भनेर प्रोत्साहन दिनुभयो । अहिले यही मेरो लक्ष्य र उद्देश्य बन्न पुगेको छ । अहिले म यसैमा खुसी छु । अब यही नै मेरो कर्म क्षेत्र हो ।
नेपालमा गीत गाएर मात्र बाँच्न सकिन्छ ?
बाँच्नेहरू बाँचिरहेका छन् । गर्नेले यसमै प्रगति गरिरहेका छन् । यो व्यक्तिमा पनि भर पर्ने कुरा हो । जोसँग गला छ, कला छ उसलाई खासै गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्दैन ।
संगीतमै लागेर यसमै पूरा जीवन समर्पण गर्ने लक्ष्य छ । हेरौं, समयले कत्तिको साथ दिने हो ? म कर्ममा विश्वास गर्ने मान्छे । त्यसैले यही क्षेत्रमा संघर्ष गर्ने निर्णय गरेकी छु ।
प्रकाशित :मंसिर २६, २०७१
मीना लामा, टेलिभिजनकर्मी/गायिका
पुजा गुरुङ, गायिका
टेकेन्द्र शाह, गायिका
मिलन अमात्य, गायिका
असोज ३१ गतेको ब्लोअपमा परिना राई
हरेक प्रकारका गीत गाउनुपर्छ श्रावण १६, २०७३
दोस्रो इनिङको थालनी सुखद भैरहेको छ श्रावण ११, २०७३
काले केटाले मलाई विदेशसम्म पुर्‍यायो श्रावण ३, २०७३
संगीत नै मेरो मुख्य कर्म हो - प्रकाश ओझा (गायक) असार २९, २०७३
नक्कली नानीको ठेट शब्दले मन जित्यो असार २४, २०७३
वर्षमा चारवटा गीत गाउनेछु असार २१, २०७३
गायनलाई निरन्तरता दिइरहनेछु असार ११, २०७३
शास्त्रीय तथा आधुनिक गीत गाइरहेको छु असार ६, २०७३
हरेक शैलीका गीत गाइरहेकी छु जेष्ठ २६, २०७३
संगीतको प्रशिक्षणले आत्मविश्वास बढाउँछ जेष्ठ १९, २०७३